Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 7, 2019 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့သိရန်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးက "cybercourtoisie" ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်။
ကောင်းသောဘာသာရပ်လိုင်း၏ဥပမာများ "ဟုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအစည်းအဝေး၏နေ့စွဲ", "သင့်ရဲ့တင်ပြချက်အပေါ်လျင်မြန်စွာဆိုတဲ့မေးခွန်းကို" သို့မဟုတ်ပါဝင်သည် "ဟုအဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုများအတွက်အကြံပြုချက်။ "
လူတွေက ဖွင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။ အီးမေးလ်က ဘာသာရပ်လိုင်းပေါ်မူတည်၍ သင်သည် ၎င်းတို့၏စိုးရိမ်မှုများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြောင်း စာဖတ်သူများအား သိစေမည့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နေလျှင်, သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သငျသညျလွတ်လပ်သောရှိမရှိသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာပေးစာယူများအတွက်ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုမှုကိုပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်အကောင့်ကိုအသုံးလျှင်သင်ဒီလိပ်စာကိုရွေးချယ်သောအခါမူကား, သင်သတိထားဖြစ်ရမည်။
"reply all" ကိုမနှိပ်ခင်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားပါ။
မည်သူမျှသူတို့နှင့်ဘာမှမဆိုင်တဲ့သူ ၂၀ မှအီးမေးလ်များကိုဖတ်လိုကြသည်။ လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေမှာမက်ဆေ့ခ်ျအသစ်တွေအကြောင်းကြားစာတွေရတတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်မှာပေါ်လာတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေတဲ့အတွက်အီးမေးလ်တွေကိုလျစ်လျူရှုခြင်းဟာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်အသင်းဝင်အားလုံးအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သည်မဟုတ်လျှင် "reply to all" ကိုနှိပ်ပါ။
ဖတ်ရန် Secure Voluntary Mobility အတွက်တောင်းခံစာကိုရေးဆွဲပါ
သငျသညျအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်၏စာဖတ်သူကိုပေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့အပြည့်အဝအမည်, ခေါင်းစဉ်, ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအပါအဝင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အနည်းငယ်ကိုလူသိရှင်ကြား add နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆိုရိုးစကားသို့မဟုတ်သရုပ်ဖော်ပုံများနှင့်အတူဝန်ကိုထုတ်မသွားကြပါဘူး။
အဆင်ပြေ! မင်္ဂလာပါ "" မင်္ဂလာပါ "ကဲ့သို့သောပေါ့ပေါ့နှင့်အကျွမ်းတဝင်စကားလုံးများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်" ဒါမှမဟုတ် "သင်မဟုတျလော" ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအသား၏စိတ်အေးလက်အေးသဘောသဘာဝအီးမေးလ်တစ်စောင်ထဲတွင် salut မထိခိုက်သင့်ပါတယ်။ "" မင်္ဂလာပါ "ဟာအလွန်အလွတ်သဘောနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အခြေအနေမှာမသုံးသင့်ပေသည်။ "ဟဲလို" သို့မဟုတ်အစား "မင်္ဂလာညနေခင်း" ကိုသုံးပါ။
ဟာသအလွယ်တကူမှန်ကန်သောသေံသို့မဟုတ်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေမပါဘဲဘာသာပြန်ချက်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရနိုငျသညျ။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လဲလှယ်မှာ, သင်လက်ခံရရှိသူကိုသိမဟုတ်လျှင်အီးမေးလ်များကိုဟာသအထဲကထွက်သွားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်မဖြစ်စေခြင်းငှါ, စဉ်းစားကြောင်းရယ်စရာတစ်ခုခု။
ကျနော်တို့အခြားများ၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားမမွငျနိုငျသောအခါအညံ့ဖျင်းသောဆက်သွယ်ရေးအလွယ်တကူကြောင့်အထူးသဖြင့်စာဖြင့်ရေးသား form မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုမှဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ လက်ခံသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံသို့မဟုတ်အသိပညာသင့်ရဲ့အဆင့်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
ဖတ်ရန် အီးမေးလ်များ သို့မဟုတ် စာများပေးပို့ခြင်းသည် ပိုကောင်းပါသလား။
ဒါဟာ High-အခြေအနေတွင်ယဉ်ကျေးမှု (ဂျပန်, အာရသို့မဟုတ် Min Nan Chinese) သင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာမီဖြည့်ဆည်းချင်သောစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းလှ၏။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာန်ထမ်းကသူတို့အရေးအသားမှာပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ကြ၏ဒါကြောင့်ဘုံဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, (ဂျာမန်အမေရိကန်လူမျိုးသို့မဟုတ်စကင်ဒီနေး) အနိမ့်နောက်ခံနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူအမှတ်ရန်အလွန်လျင်မြန်စွာသွားကြဖို့ပိုနှစ်သက်။
ဒါဟာသင်ဖို့စေလွှတ်ခဲ့သည်သမျှသောအီးမေးလ်များကိုဖြေဆိုရန်ခက်ခဲသည်, သို့သော်သင်ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါကပေးပို့သူတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုမျှော်လင့်အထူးသဖြင့်လျှင်, အီးမေးလ်ကမတော်တဆသင့်ဆီပို့ခဲ့သည်ဘယ်မှာအမှုပေါင်းပါဝင်သည်။ တစ်ဦးကတုန့်ပြန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒီလူကိုအတူတူကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့တူညီသောဧရိယာ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, အီးမေးလ်ဘို့အကောင်းတစ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာတုန့်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာ -“ မင်းအရမ်းအလုပ်များတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုဒီအီးမေးလ်ပို့ပေးချင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ ပြီးတော့မင်းကိုမင်းသိစေချင်တယ်၊ မင်းကမင်းဆီကိုသင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆီပို့ပေးပါမယ်။ "
သင့်ရဲ့အမှားတွေကို သင့်အီးမေးလ်ရဲ့လက်ခံသူများမှသတိမပြုမိမသွားခဲ့ပါဘူး။ နှင့်အညီ, လက်ခံသူသည်နှင့်အညီ, သင်ပြုတော်မူပြီးမှအဘို့တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါသည်။
စာလုံးပေါင်း Checker အပေါ်အားကိုးမနေပါနဲ့။ ပေးပို့ခြင်းမပြုမီပိုကောင်းကျယ်လောင်စွာ, အကြိမ်ပေါင်းများစွာ Read နှင့်သင့်မေးလ်ပြန်ဖတ်။
သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်မှန်ကန်သောရေးသားခြင်းမပြီးစီးမှီအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့မတော်တဆရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမှ reply တောင်မှအခါ, ကလက်ခံရရှိသူရဲ့လိပ်စာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောခံရဖို့အဆင်သင့်ကြောင်းကိုသေချာတဲ့အခါမှသာထည့်ရန်ပညာရှိဖြစ်၏။
ဖတ်ရန် အီးမေးလ်က template ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်
သငျသညျမှာ "ရန်" ကိုအီးမေးလ်ပေါ်တွင်သင်၏လိပ်စာစာအုပ်ကနေနာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာသင်အရမ်းသတိထားဖြစ်ရမည်။ ဒါဟာသင်တို့အဘို့နှင့်အမှားအားဖြင့်မေးလ်လက်ခံရရှိပုဂ္ဂိုလ်အဘို့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည့်, မှား name ကို select လုပ်ပြီးရန်လွယ်ကူသည်။
အဆိုပါ Cardinal အုပ်ချုပ်မှုကို: သင့်အီးမေးလ်များကိုတခြားသူတွေကိုဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်သင့်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုသို့သော Arial, Calibri သို့မဟုတ် Times New Roman အဖြစ် font ကိုဖတ်မှ 10 သို့မဟုတ် 12 point ရဲ့ဇာတ်ကောင်လွယ်ကူသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။ အရောင်သည်အမဲရောင်အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပြက်လုံးဘာသာပြန်ချက်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရနေကြသည်နည်းတူ, သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလျင်မြန်စွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုသူမကျြနှာကိုမှတစ်ဦးဆွေးနွေးမှုမျက်နှာသို့ရမညျ့အသံတွေကိုနှင့်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေရှိသည်ပါဘူးဆိုတာသတိရပါ။
နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်, ငါတို့သည်သင်တို့ Submit နှိပ်ခင်ကျယ်လောင်စွာသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါအကြံပြုပါသည်။ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အခက်ခဲဖြစ်ပုံရသည်လျှင်ဤစာဖတ်သူမှကြမ်းတမ်းအသံပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, လုံးဝအနုတ်လက္ခဏာစကားလုံးများကို ( "ကျရှုံးခြင်း", "မကောင်းတဲ့" သို့မဟုတ် "လျစ်လျူရှု") ကို အသုံးပြု. ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲ "ကျေးဇူးပြုပြီး" ဟုပြောနှင့် "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
cybercourtoisie ၏သတိပေးမှုအောကျ မတ်လ 7, 2020Tranquillus
ကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့ ဆန္ဒပြအီးမေးလ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာသားကို proofread လုပ်နည်း။